Danho reHurumende Rekuti Mashoko eKuda Kupidigurwa kweHurumende Manyepo Osimudza Mibvunzo Yakawanda
Chikumi 11, 2020
Hurumende yakaramba neChitatui kuti mashoko ekuti pane vari kuronga kuibvisa nechisimba manyepo.
NeChitatu ruzhinji rwevanhu munyika rwunonzi rwakashamiswa kunzwa gurukota rezvemukati menyika, VaKazembe Kazembe, vachitaura kuvatori venhau, vakakomberedzwa nevakuru vemauto nemapurisa, vachiti manyepo kuti pane hurongwa hwekuda kupidigurwa kwehurumende nechisimba.
VaKazembe vakapomera chikwata chenhengo dzeZanu PF cheG40 vakadoma nezita VaSavior Kasukuwere, vanopikisa hurumende vakadomawo VaJob Sikhala veMDC Alliance, vemizinda yekunze pamwe nevamwe vemakereke sevanhu vari kufambisa mashoko avanoti enhema aya.
Asi vakawanda vari kubvunzana kuti mashoko aya akabuda riinhi uye papi? Tisakanganwa kuti vakuru vakati kutya chati kwatara hunge uine katurike.
Izvi zvingadai zviri izvo here zviri kuitika muhurumende pachitariswa kuti iyo yakapindawo mumasimba kuburikidza nekubvutwa kwemasimba kubva kune vaive mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pachibatsirwa nemauto?
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCentre for Natural resource Governance, VaFarai Maguwu, vanoti mashoko akaburitswa naVaKazembe aya anogona kunge ari mucherechedzo wekuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika, vachiti hurumende inogona kunge iri kutora matanho ekuda kuvhara zvinhu zvisati zvanyanya kushata.
Vamwe vanoti izvi hazvisi zvinhu zvitsva kuitika muhurumende yeZanu PF zvekutaura nezvekuda kupidigurwa kwehurumende nechisimba, vachiti kunyange munguva yaVaMugabe vanhu vakawanda vaisungwa vachipomerwa mhosva yekuda kuvabvisa nechisimba.
Asi VaMaguwu vanoti hapana chiutsi chisina moto, vachiti zvakaitwa nehurumende kuvhunduka chati kwatara.
Vakurudzirawo kuti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vazadzise chivimbiso chavo pavakapinda panyanga chekuda kuparadza huwori, vachiti vanofanirwa kutdaro nekuti huwori ndihwo huri kuuraya nyika.
Ukuwo, vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, Doctor Simba Mavaza, vanoti zvakaitwa nehurumende zviri pamwero sezvo vanhu vaizogona kusazogadzikana kuburikidza neguhwa raibuda irori, nekudaro zvakanga zvakakosha kuti VaKazembe vatsigise hana dzevanhu.
Doctor Mavaza vanoti VaSikhala munhu agara achizivikanwa kuti anongotaura zvaafunga, uye vakambotaura kaviri kose kuti hurumende yaVaMnangagwa inofanirwa kubviswa gore risati rapera.
Vachipindura mubvunzo wekuti sei vari kufambisa mashoko enhema aya vasiri kubvunzurudzwa nemapurisa, Doctor Mavaza vanoti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, uye kana VaSikhala vakawanikwa vaine mhosva vanosungwa vomiswa pamberi pematare.